သက်ဝေ: အမှတ်တရ ဒီဇင်ဘာ
rose December 21, 2011 at 11:55 PM
ဖတ်လို့ ပြီးသွားမှာ စိုးမိတယ် မမသက်ဝေ။ မမတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အမှတ်တရ နေ့စွဲလေးကလည်း ခရစ်စမတ် အကြိုနေ့လေးပေါ့။ နူးညံ့ပြီး ကဗျာဆန်လိုက်တာ။ အမှတ်တရ အလေးအနက်ထားပြီး ရို့စ်ရဲ့ တက်ဂ်ပို့စ်လေးကို ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်မိပါတယ် မမရေ...။ ကျေနပ်တယ်၊ နှစ်သက်တယ်။ ဒီလို စာကောင်းကောင်းလေးတွေ ထပ်ဖတ်လို့ရအောင် နောက်ဆို များများ တက်ဂ်ရမယ် ဟိဟိ :)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! December 22, 2011 at 12:52 AM
တစ်ကယ်လှတယ်မမရေ..အမှတ်တရက ရင်ထဲစွဲနေအောင်ကို အမှတ်ရနေစေတော့မှာပဲ...နော် မမ :) ၊
Hmoo December 22, 2011 at 1:51 AM
Nyi Linn Thit December 22, 2011 at 4:18 AM
ဟား.. နေကြာစေ့ ခွာသံ တဖြောက်ဖြောက်နဲ့ ခရစ်စမတ်အိဗ် က ဂလိုနူးညံ့သိမ်မွေ့ ခဲ့တာကိုး..၊း) လူသေတွေ ခွဲတဲ့နေရာကို ပြတာဟာ ရိုးရိုးသားသား တိုက်ဆိုင်မှုလား၊ ကြိုတင် အကွက်ချ စီစဉ်မှုလား ဆိုတာ စောကြောချင်စရာတောင် ကောင်းနေသလိုလို..၊ ဒီ ပို့်စ်လေး ဖတ်ရတာ Bûche de Noël ဆိုတဲ့ ခရစ်စမတ် ချော့ကလက်ကိတ်ကို စားရသလိုပါပဲ..၊ ချိုအီမွှေးပျံ့ပြီး ချော့ကလက်နဲ့ အပြိုင်ကို ပျော်ဝင်ချင်စရာ...။း)
ပြည်ကောင်းအောင် December 22, 2011 at 4:20 AM
ရိုမန့်တစ် အကြောင်းအရာလေးတခု အကြောင်း ရေး ထားတဲ့ အရေးအသားလေးကလည်း ရိုမန့်တစ် ဆန်ဆန် အေးချမ်းလှပလို့..
:) ပျော်စရာ ကြည်နူးစရာလေး
Thandar Lwin December 22, 2011 at 10:17 AM
အမ ကိုကြီးတော့မသိ..ညီမတော့ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အမကို ဖက်နမ်းချင်လိုက်တာ..အဟိ။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် ခရစ်စမတ် ဖြစ်ပါစေ လို့။
ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) December 22, 2011 at 10:53 AM
မှတ်မှတ်ရရရှိစေမယ့် အမှတ်တရ ဒီဇင်ဘာလေးပါပဲ...
မဒမ်ကိုး December 22, 2011 at 11:31 AM
အင်းး မမရေ သူများတွေရဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုအရင်လိုက်ဖတ်နေတာ ဟိဟိ ကိုယ်ကတော့ လာမယ် ကြာမယ်
မိုးငွေ့...... December 22, 2011 at 12:12 PM
သပ်လှတဲ့ ဒီဇင်ဘာစာပန်းခင်းလေး...။ ရင်ခုန်ကြည်နူးမှုတွေနဲ့အတူ နှင်းတွေဝေနေခဲ့တယ်...။ မမသက်ဝေ အရေးအသားမှာ မျောသွားခဲ့တယ်...။
ပျော်ရွှင်သော ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ...။
မီယာ December 22, 2011 at 1:25 PM
ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ... ပျော်စရာ ကောင်းတဲ့ ခရစ်စမတ် အမြဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့ :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) December 22, 2011 at 3:48 PM
သူများတွေရဲ့ ဒီဇင်ဘာက ရင်ခုန်ဖို့ကောင်း
ဒါကြောင့်လည်း ဒီဇင်ဘာကပိုပြီး ချစ်စရာ ကြည်နူးစရာကောင်းသွားတာကိုး..
စကားပန်း December 22, 2011 at 4:23 PM
Vista December 22, 2011 at 6:35 PM
သဒ္ဓါလှိုင်း December 22, 2011 at 8:54 PM
ဖတ်ရင်းကြည်နူးမိပါတယ်မမသက်ဝေ။ တကယ့်ကိုလှပသက်ဝင်တဲ့ ဒီဇင်ဘာလေးပါပဲ။ ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ ဒီဇင်ဘာလေးတလ။။။
SHWE ZIN U December 22, 2011 at 10:21 PM
ကြည်နူးစရာ စာစု လေးပါဘဲ
ဒါပေမဲ့ နေကြာစေ့ သုံးထုပ် ဆိုတော့ လွန်တယ် နော် အစားပုတ်တယ်
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 23, 2011 at 3:17 AM
အပေါ်က ကော်မန့်တွေ ပြောသလိုပါပဲ ...း)
သတိုး December 23, 2011 at 11:49 AM
ပြန်တွေးတိုင်း ရင်ခုန်ကြည်နူးစရာ အမှတ်တရ ဒီဇင်ဘာ ပေါ့ဗျာ...။
...အလင်းစက်များ December 25, 2011 at 12:27 PM
ခုရော နေကြာစေ့ အခွံခွာပေးသေးသလား အစ်မ. :P
mstint December 26, 2011 at 12:06 AM
ဖတ်သွားတယ် မသက်ရေ။ စာရေးကောင်းတယ်။
မြသွေးနီ December 26, 2011 at 6:42 PM
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ခရစ်စမတ်ရက်လေးက စွဆောင်သွားတယ်။
နူးညံ့တဲ့အရေးအသားက စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်ကိုတောင် ပျော့ပြောင်းသွားသလိုလို..။
(ခရစ်စမတ်ရက် အွန်လိုင်းမတက်ဖြစ်လို့ အခုမှ ရောက်တော့တယ် အစ်မသက်ဝေရေ...)
rose of sharon January 1, 2012 at 10:52 AM
နူးညံ့သိမ်မွေ့လှပလွန်းတဲ့ အမှတ်တရဒီဇင်ဘား))
Thandar Lwin January 4, 2012 at 3:37 PM
အမ သက်ဝေ C Box မှာ ရေးမရ လို့ ဒီမှာဘဲ ရေးလိုက်ပါတယ် ။
၂၀၁၂ မှာ အမ သက်ဝေ ပျော်ရွှင် ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ ပြီး ကောင်းသော လိုအင် ဆန္ဒတွေ ပြည့်စုံပါစေ ။ လှပ တဲ့ စာ လှလှ လေးတွေ အများကြီးရေး နိုင်ပါစေ ။ အမရဲ့ ကိုကြီး ကို လဲ ဒီထက်ရစ်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ၇ှင်။
Thandar Lwin January 4, 2012 at 3:40 PM
အမ သက်ဝေ C Box မှာေ၇းမရ လို့ ဒီမှာဘဲ ရေးသွားပါတယ်။
၂၀၁၂ မှာ အမ သက်ဝေ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ကောင်းသော လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့် စုံ ပါစေ ။ လှပ ချစ်စရာကောင်းသော စာလေးတွေ အများကြီးရေးနိုင်ပါစေ ။ အမရဲ့ ကိုကြီး ကိုလဲ ဒီထက် ပိုပြီး ရစ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။
မြတ်ကြည် January 6, 2012 at 5:14 PM
မမသက်ဝေ ချစ်ခြင်းအစရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလေးပေါ့နော်။ :)
Myat Pan Nwe (မြတ်ပန်းနွယ်) January 13, 2012 at 1:57 PM
ဖတ်ပြီး စိတ်တွေ အရမ်းကြည်နူးသွားမိတယ်။
Ko Kyaw Oo December 15, 2015 at 4:27 PM
ေ ပျာ် ရွှ င် စွာကြုံ ဆုံ ခြ င်းဟာ
ဝ မ်းန ည်းခြ င်းနဲ့ တ စ်နေ့ ခွဲ ရ မ ယ် . . . . . . )))
( ခ ရ စ္စ မ တ် အ လွ မ်း- စို င်းထီးဆို င် )